Sakafo legioma | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Sakafo legioma
Ahoana no ahafahana maniry topinambur, manangom-bary tany amin'ny firenena
Ny zavakantany Jerosalema dia zavamaniry isan-taona, mitovy amin'ny ovy. Miala tsy ho ela amin'ny toetry ny toetr'andro izy, tsy mieboebo amin'ny fikarakarana, manome vokatra lehibe. Ny artichoke ao Jerosalema dia malaza amin'ny fisakafoanana sy ny fitsaboana noho ny toetra mahasoa sy ny fanasitranana. Ao amin'ity lahatsoratra ity, hianatra ny tombotsoan'ny orinasa iray ianao, ny fomba famokarana artichokes an'i Jerosalema, ary koa ireo fitsipika fototra amin'ny fambolena sy fikarakarana artichokes an'i Jerosalema.
Izay ilaina amin'ny vatana mangatsiaka maitso
Margilan na rhimana maitso dia fambolena voankazo mahatsiravina, nentina avy amin'ny fambolena any amin'ny tany Uzbek. Manana fiaraha-miasa manan-danja izy io, izay nahita ny fampiharana azy amin'ny lafiny maro amin'ny fiainantsika. Aorian'izay dia hijery sy hanombantombana ireo sehatra rehetra amin'ny fampiasana azy isika, ary hizara vaovao mahaliana sy mahasoa momba an'io legioma tsy mampino io ary tena mahasoa.
Yacon: ny fampiasana legioma, fambolena ary fiahiana
Miaraka amin'ny ovy, voatabia, katsaka, tara-masoandro ary kolontsaina hafa avy any Amerika, dia nentina tany amintsika ny jakana. Ity zavamaniry tsy dia fantatra loatra eto amin'ny firenentsika ity dia mitovy amin'ny toetoetrany ao amin'ny artichoke an'i Jerosalema, izay efa nitombo nandritra ny fotoana lava ary mahazatra ny zaridaina maro. Andao isika hahafantatra bebe kokoa an'ity zavamaniry ara-kolontsaina ity, izay tsy dia fahita firy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Sakafo legioma